Indawo yokuhlala yasePetworth - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yasePetworth
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguSally
Indawo ephangaleleyo enokuziqulathayo enazo zonke iimod ezifumaneka eSouth Downs National Park, i-International Dark Sky Reserve (IDSR), ilungele ukujonga iinkwenkwezi. Ulala ezimbini - ibhedi isayizi King. Iluncedo lweGoodwood kunye neCowdray Polo. Ngaphakathi komgama wokuhamba we-pub enkulu 'i-Stag' kunye nomda we-Ebernoe Common ye-Sussex Wildlife Trust.
Iyunithi ezimeleyo efikelelekayo ngezitepsi zezitena ngasemva kwepropathi. Indawo encinci yekhitshi kwindawo yokuhlala ephambili ikuvumela ukuba uzilungiselele. Sibonelela ngobisi, iti kunye nekofu. Igumbi linefriji edibeneyo, i-oven encinci kunye ne-microwave (engabonakali kwiifoto), i-kettle, i-toaster kunye ne-ring induction hob. Igumbi lokuhlambela eline-ensuite linesitya sesandla, i-loo, kunye neshawari kunye nentsimbi yetawuli eshushu. Igumbi lilala ezimbini kwaye ibhedi ilingana noKumkani kwaye isitayile esiphezulu sithetha ukuba kukho iisilingi ezithambekileyo. Isignali engenazintambo ayinamandla kakhulu kwigumbi ngoko ke indawo ayifanelekanga ukuyisebenzisa njengendawo yokusebenza ye-intanethi kodwa i-iplayer iyasebenza.
4.97 · Izimvo eziyi-110
Ikhaya lethu likwenye yezona ndawo zintle zaseNgilani. Le ndawo yeWest Sussex igcwele imbali. I-National Trust's 'Petworth House' ikufuphi kwaye ilikhaya kwimizobo ka-'Turner' (yayiyenye yeendawo zefilimu yakutsha nje). I-Petworth ngokwayo yidolophu exakekileyo kunye nemecca yabathandi bezinto zakudala abaziqhayisa ngenani elikhulu leevenkile. Ikwanayo nembasa yeDeli ethi 'The Hungry Guest' kunye nenani leevenkile zekofu ivenkile enkulu yeencwadi, ivenkile yamakhadi kunye nezinye iindawo zokutyela.
Idume ngabahambi emaphandleni ineendlela ezininzi zeenyawo kunye nemikhala. Unokuhamba usuka ekhayeni lethu uhle uye kwindawo yentengiso yasekhaya ukuze ufumane isidlo esimnandi kunye nepinti yeSussex Ale.
Ukuqhubela phambili eMidhurst ibhaso eliphumelele ibhaso elithi 'Cowdray Farm Shop & Cafe' yinto yokwenyani. Ivenkile ibonelela ngoluhlu lweemveliso ezimnandi, uninzi lwayo lwasekhaya, ngelixa iCafe ibonelela ngokutya okuphekwe ekhaya okumangalisayo. ICowdray ikwalikhaya lePolo kwaye ixesha lonyaka liqala ngoAprili ukuya kutsho ngoSeptemba.
IGoodwood imalunga nemizuzu engama-20 yokuqhuba. UMnyhadala weNgxaki, uMnyhadala weMvuselelo kunye nomdyarho wamahashe zenza ukuba ibe yeyona ndawo ibalaseleyo yokutyelela.
Umgama othe qelele sisiXeko seCathedral saseChichester esinedumela lehlabathi elithi 'Chichester Festival Theatre' esindleka imidlalo emangalisayo nabanye babadlali ababalaseleyo belizwe.
Kwaye ukuba lulwandle ulandela iWest Wittering yindawo entle yokutyelela. Imalunga nemizuzu engama-45 ngemoto.
Love living in West Sussex with my husband Richard, our two Lurchers and cat. I spend my time walking the dogs in the amazing countryside which surrounds our home, tending the vegetable patch and playing tennis at the local club in Petworth.
Love living in West Sussex with my husband Richard, our two Lurchers and cat. I spend my time walking the dogs in the amazing countryside which surrounds our home, tending the vege…
Sihlala kwindlu enkulu kwaye kufuneka sijikeleze ukuze sidibane nawe.